Sidee ayey duqeyn la’aanta u saameysay howl-gallada ciidanka Soomaaliya? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Sidee ayey duqeyn la’aanta u saameysay howl-gallada ciidanka Soomaaliya?
Xaashi ayaa sheegay in duqeymuhu ay qeyb weyn ka qaadanayeen dagaalka adag ee lagula jiro banaadirsom Al-Shabaab, wuxuuna shaaciyey in lagu bartilmaameedsan jiray goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan xoogaga Al-Shabaab ee aysan gelin karin Infantry-gu.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay jeclaan lahaayeen in markale dib loo bilaabo duqeymahaasi, si loogu wiiqo awooda banaadirsom Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Hadalkan ayaa ku soo aadayo, xilli dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kordhisay dhaq-dhaqaaqyada milatari ee ka socda koonfurta iyo bartamaha dalka, kuwaas oo suura-geliyey in ciidamada Xoogga ay banaadirsom Al-Shabaab kala wareegaan deegaano horleh.
Previous articleXOG: Madaxweyne Farmaajo Oo Khadka taleefoonka kula hadlay Amiirka Qatar
Next articleDigniin culus oo loo diray ganacsatada Al shabaab siiya Lacagaha baada ah